Minista njem nlegharị anya nke Seychelles na -enyocha obere ụlọ ọrụ na Bel Ombre na Mahé
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Minista njem nlegharị anya nke Seychelles na -enyocha obere ụlọ ọrụ na Bel Ombre na Mahé
Onye minista njem nlegharị anya nke Seychelles gara Bel Ombre na Mahe.
Ọtụtụ ndị na-enye ebe obibi njem nlegharị anya na-egosi ngwaahịa kacha mma, na-a attentiona ntị nke ọma na nkọwa yana na-arụ ọrụ na ọkwa ọkwa 5, ka Minista mba ofesi na njem, Maazị Sylvestre Radegonde, kwuru na Fraịde, Ọgọst 26, 2021, n'oge nleta. obere ụlọ ọrụ na Bel Ombre.
Onye Minista na Fraịde gara obere ụlọ ọrụ iri na ise, na -enwe mkparịta ụka ya na onye nwe ya/ndị njikwa ya na ndị ọrụ ya.
O ji aka ya nụrụ ihe ịma aka ndị ha na-eche ihu ma dụọ ha ọdụ na ohere ha nwere.
Onye isiala Radegonde bụ onye odeakwụkwọ ukwu na -ahụ maka njem, Sherin Francis so ya.
N'ịga n'ihu na ebumnuche ya ịghọta ụlọ ọrụ njem na ndị egwuregwu ya nke ọma, onye minista na Fraịde gara obere ụlọ ọrụ iri na ise, na-enwe mkparịta ụka ya na onye nwe ya/ndị njikwa ya na ndị ọrụ ya ma na-ege ntị na mbụ ihe ịma aka ha na-eche ihu ma na-adụ ha ọdụ maka ohere dịnụ. . Ileta obere ụlọ ọrụ ndị a dị ezigbo mkpa n'ihi na ha chọrọ nkwado karịa ụlọ ọrụ buru ibu ma na -eburu mmụba nke na -efukarị na nnukwu agbụ na ebe ntụrụndụ, Minista Radegonde kwuru.
Ile ọbịa nke Creole bụ agwa ama ama na njirimara nke ndị na -eme ihe nkiri n'ime ụlọ ọrụ njem, o kwuru. Onye hụrụ ya n'anya ọtụtụ ndị na -eleta Seychelles, nke a bụ ihe ndị ọbịa na-ahụ ụzọ site n'aka ndị ọbịa ha na obere ụlọ ọrụ na-eme mmegharị obere, ma ọ bụ na-ekele ha ihe ọ localụ localụ obodo ma ọ bụ na-emeso ha nri nri esiri esi n'ụlọ, nke ọtụtụ n'ime ha na-ahụ onwe ha n'anya. ha na -achọpụta ihe ụtọ dị iche iche nke nri creole.
Onye ozi Radegonde sonyere na nleta ya nke La Maison Hibiscus, ụlọ ezumike Cove, ụlọ ezumike osimiri, Beach Cove, The Drake Sea Side Apartment, Surfers Cove, Treasure Cove, Daniella's Bungalow, Casadani, Villa Rousseau, Forest Lodge, Le Chant de Merle , Bamboo River Lodge, The Palm Seychelles na Marie Laure Suites site n'aka onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, Sherin Francis, yana onye otu ahọpụtara na National Assembly maka Bel Ombre, Honorable Sandy Arissol.
Ọgọst bụ ọnwa na -arụ ọrụ maka ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ gara, ebe ọtụtụ na-ekwenye na ntinye akwụkwọ na-arị elu kemgbe akụkụ ikpeazụ nke ịmalitegharị obodo ahụ na Machị gara aga.
Mgbe ha na -ekwu maka etu ha siri mee ọnọdụ ahụ, na -enye nhịahụ nke ụlọ ọrụ ahụ banyere, ha mere ka ọ pụta ìhè na ha tụgharịrị na njem nlegharị anya nke bụ ihe so mee ka ọnụ ụzọ ha ghe oghe.
Site na kagbuo ndị ọbịa mba ofesi na -abawanye ugboro ugboro, ndị nwe nguzobe na -ekwu na ha ewerela ụzọ mgbanwe dị mma nke na -eweta nkewa, ụfọdụ ndị ọbịa na -eyigharị ọnụnọ ha kama ịkagbu kpamkpam.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ebe obibi ndị njem na -anabata ndị ọbịa si n'ahịa isi mmalite, enwere ole na ole ka dabere na ndị ọdịnala. Minista Radegonde chetaara ha na ọ dị ha mkpa ịbanye n'ahịa nwere ikike, dị ka Eastern Europe na UAE, ma tụleghachi usoro azụmaahịa ha iji lanarị, nke enwere ike ime n'okpuru nduzi nke Ngalaba Njem Nleta.
Ha kwuru na enweghị ndị ọrụ a pụrụ ịdabere na ha bụ otu n'ime nnukwu nsogbu ha, ha kwuru, ebe ọtụtụ ndị nwe ụlọ na -ekwusi ike na ha na -agba mbọ ike ha iji dobe ndị ọrụ Seychelles. Ọ bụ ezie na ụfọdụ enweela ihe ịga nke ọma na mbọ a, ọtụtụ kwuru na ụfọdụ ndị na -arụ ọrụ na mpaghara anaghị arara ụlọ ọrụ ahụ na ha adịghị njikere itinye oge na mbọ a chọrọ. Maazị Loizeau nke Casadani rụtụrụ aka na ọrụ mpaghara ka mma mgbe niile, agbanyeghị, ozugbo ewepụrụ ndị na-abụghị ndị ọrụ na ọnụ ọgụgụ anyị, ya bụ ụmụaka, ndị agadi, ndị na-enweghị ike ịrụ ọrụ na ndị jụrụ ajụ, ọ dị obere nhọrọ fọdụrụ. na oge ụfọdụ, ha ga -achọ ọrụ site na ofesi.
Imekwu ihe omume dịịrị ndị njem nlegharị anya n'ime ebe a bụkwa isiokwu nke mkparịta ụka, ọtụtụ ndị nwe ụlọ na -achọta ndị ọbịa ha na -achọ ihe ha ga -eme, okwu nke Minista Radegonde zara, na -ekwughachi na a na -arụ ọrụ ịgbanwe nke a ebe ọ bụghị naanị na ọ na -enye. ndị ọbịa na -eme ihe mana ha nwekwara ihe mere ha ga -eji nọrọ ogologo oge ebe a na -emefu ma na -abawanye mmefu, na -ebute ego na mba ahụ.
Nchegbu ndị ọzọ a tụlere gụnyere ọgba aghara mkpọtụ, mmetọ, mkpofu ahịhịa na ibelata ịnweta osimiri n'ihi ihe ụfọdụ.
N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ nzaghachi dị mma, ebe ọtụtụ ndị nwe ụlọ na -ekwusi ike na obodo mepere n'oge kwesịrị ekwesị, na -enye ha ohere ịlanarị. Ebe mmeghe ga -emepe tupu ọtụtụ ndị ọzọ enye ya asọmpi asọmpi, PS Francis zara ya, usoro ezi uche nke mba ahụ mere ka ọ dịrị ya mfe ma na -amasịkwa ndị mmadụ ịga njem ka obodo na -anabata ndị ọbịa site na Alaska.
N'ikwu maka ọbịbịa ndị a, Honorable Arissol kwuru na ya chọpụtara na ha na-amị mkpụrụ ka ha na ndị nwe ụlọ nrụpụta na-enwe mmekọrịta na-atọ ụtọ, na-amụtakwu gbasara ọnọdụ ha na nchegbu ha, nke gụnyere okwu metụtara GOP na ndị ọrụ a na-apụghị ịtụkwasị obi. Ọ na -ekwenyekwa na Mr Rousseau nke Forest Lodge, onye kwuru na mmemme agụmakwụkwọ Seychelles Tourism Academy bụ ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ yana na ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịghọta na enwere ndụ ụlọ oriri na ọ whichụ whichụ nke na -achọ ma na -achọ ịchụ àjà yana agụụ.
N'inwe mmasị na ụlọ ọrụ ha gara, Minista Radegonde na PS Francis kwuru banyere etu ụfọdụ obere ụlọ ọrụ a si ewepụta ngwaahịa kacha mma, na-elebara nkọwa anya ma na-arụ ọrụ n'ụkpụrụ ọkwa 5.
Nleta kwa izu bụ akụkụ nke mbọ Minista Radegonde na -eme ka mmekọrịta ya na ndị na -eme ihe nkiri dị n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke mpaghara ahụ nke ga -eme ka ọrụ ya dị mfe n'idozi nsogbu ndị ụlọ ọrụ na -eche n'okpuru Pọtụfoliyo ya.